चीनमा तांगशान भूकंप
1976 को महान तांगन भूकंप
प्राकृतिक आपदा यो सांस्कृतिक क्रांति समाप्त भयो
तीव्रता 7.8 भूकम्प जसले ताङ्गशान, चीनलाई 28 जुलाई 1983 मा मारेको थियो, कम्तीमा 242,000 मानिस (आधिकारिक मृत्युको संख्या)। केही पर्यवेक्षकहरूले वास्तविक टोलको रूपमा 700,000 भन्दा उच्च स्थान पाउँछन्।
ठूलो तांगन भूकम्पले पनि बीजिंगमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिको सीट चढायो - शाब्दिक र राजनीतिक दुवै।
त्रासदीलाई पृष्ठभूमि - राजनीति र 1982 मा चार को गंगा:
चीन 1976 मा राजनीतिक किण्वन भएको थियो।
पार्टी अध्यक्ष, माओ जेडोंग , 82 वर्षको उमेर थियो। उनले अस्पतालमा त्यस वर्ष धेरै खर्च गरे, धेरै हृदयको आक्रमण र पुरानो उमेरका अन्य जटिलताहरू र भारी धूम्रपानको पीडा भइरहेको छ।
यसबाहेक, चिनियाँ जनता र पश्चिमी-शिक्षित प्रिमियर, झौ एनलईले सांस्कृतिक क्रांतिको अभावको भनाई बढेको थियो। झाउ अहिले अध्यक्ष माओ र उनका सहकारीले आदेश दिएका केहि उपायहरूको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्न थालेको छ, जुन 1975 मा "द फोर्ट मेडिसिमाइजेसन" को लागी धक्का दिए।
यी सुधारहरू "माटोमा फर्केर" मा सांस्कृतिक क्रांतिको जोरमा चिन्हित विपरीत विपरीत थियो। जाउ चीनको कृषि, उद्योग, विज्ञान र राष्ट्रिय सुरक्षालाई आधुनिक बनाउन चाहन्थे। आधुनिकीकरणको लागि उनका कलम " ग्याङ्ग गंग ", "मामाम माओ (जियांग किंग)" को नेतृत्व मा माओवादी कठिनाइको शक्तिशाली "क्रोध" को क्रोध खारेज भयो।
झोउ एनलाइई जनवरी 8, 1976 मा तांगशान भूकम्पको छ महिनाअघि मात्र मृत्यु भयो। उनको मृत्युले चिनियाँ जनताले व्यापक रूपमा विलाप गरेको थियो, तथापि कि चारको गंगले आदेश दिएका थिए कि जाउको लागि जनताको दुर्व्यवहारलाई खेल्नु पर्छ।
यद्यपि, सैकड़ों हजारौं अपमानजनक शोकहरूले जाउको मृत्युमाथि आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न बीजिंगको तियानानमेन स्क्वायरमा बाढी लगाए। 1949मा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना पछि चीनमा यो पहिलो जनवादी प्रदर्शन थियो, र केन्द्रीय सरकारको विरुद्धमा जनताको बढ्दो क्रोधको एक निश्चित चिन्ह।
झोउ अज्ञात भयो Guofeng द्वारा प्रीमियर को रूप मा बदलीयो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आधुनिकीकरणको लागि मानक-वाहकको रूपमा जाउको उत्तराधिकारी, डन जियोपिंग थियो।
चार गंगाको डन्गलाई अस्वीकार गर्यो, जसले परिवर्तनको लागि बोलाएको औसत चिनियाँ मानकको स्तर बढाउन, अभिव्यक्ति र आंदोलनको अधिक स्वतन्त्रतालाई अनुमति दिन्छ, र त्यस समयमा प्रचलित तीव्र सतावटको अन्त्य गर्न अनुमति दिन्छ। माओले अप्रिल 1976 मा डग निकाल्यो; उनी पक्राउ परेका थिए। यद्यपि, जियांग किंग र तिनका साथीहरूले भरखरै वसन्त र प्रारम्भिक गर्मीको लागि डनको लागि निवारणको स्थिर ढोका राखे।
उनको तल को तल को परिवर्तन:
3:42 मा जुलाई 28, 1976 मा उत्तरी चीनको एक औद्योगिक शहर तांगशानमा भएको एक परिमाण 7.8 भूकम्पले मंगोलियालाई ध्वस्त गर्यो। भूकंप तांगशान मा लगभग 85% भवनहरु लाई, जो लुआन नदी को बाढी मैदान को अस्थिर मिट्टी मा बनाइयो थियो। भूकम्पको दौडान यो ज्वलन्त माटो भरिन्छ , सम्पूर्ण इलाकालाई कम गर्दछ।
बीजिंगको संरचनाले पनि क्षति पुर्यायो, केहि 87 माइल (140 किलोमिटर) टाढा। जियानजस्ता मानिसहरू टांगशानबाट 470 मील (756 किलोमिटर) टाढा थिए।
भूकम्प पछि हजारौं मानिस मरेको छ, र धेरै अधिक मलबे मा फसेका थिए।
कोइला खनिजहरूले गहिरो भूमिगत क्षेत्रमा काम गरिरहेको बेला खनालहरू उनीहरूको वरिपरि ध्वस्त भए।
अफटरहोजको श्रृंखला, रिटर स्केलमा 7.1 भन्दा बढी दर्ता दर्ता भयो, विनाशमा थपियो। भूकम्पबाट सबै सडक र रेल लाइनहरू नष्ट भएको थियो।
बीजिंगको आन्तरिक प्रतिक्रिया:
कहिलेकाहीँ भूकम्पको अन्त्यमा माओ जेडोंगले बेइजिङमा अस्पतालमा मृत्यु गरे। राजधानीबाट झन्डै झन्डै झन्डै अस्पतालका अधिकारीहरूले सुरक्षाको लागि माओको बिस्तारलाई धक्का पुर्याए।
नयाँ प्रीमियरको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार, हाउ गाउफेंगले शुरुमा विनाशको बारेमा थाहा पाए। न्यूयर्क टाइम्सको एक लेख अनुसार, कोइला खनन लि युलिन बीजिंगको विनाशको शब्द ल्याउने पहिलो थियो। गहिरो र थकित भए, ले छ घण्टाको लागि एम्बुलेंस छोड्यो, दायाँ तिर जाँदै गरेको रिपोर्टका लागि पार्टीका नेताहरूको यौगिकमा दाँया माथि।
तथापि, सरकार पहिलो पहिलो राहत सञ्चालन सञ्चालन गर्नुअघि यो दिन हुनेछ।
यसबाहेक, तांगशानका जीवित व्यक्तिहरूले अलिकति आफ्नो घरको मलबारबाट खसेका थिए, सडकमा आफ्ना प्रियजनहरूका लाशहरू ढोका। सरकारी विमानहरूले माथिल्लो भागमा भागेका छन्, रोगको महामारीलाई रोक्नको प्रयासमा खण्डहरूमा निस्सन्देही निस्सन्देह निकाल्छन्।
भूकंप पछि धेरै दिन, पहिलो जनता को लिबरेशन आर्मी सैनिकों बचाव र रिकवरी प्रयासहरुमा सहायता को लागि विनाशकारी क्षेत्र सम्म पुग्यो। जब तिनीहरू अन्त्यमा आइपुगेको भए तापनि PLA ट्रकहरू, क्रेनहरू, औषधिहरू र अन्य आवश्यक उपकरणहरू थिएनन्। धेरै सैनिकहरू सडक र रेल-लाइनहरूको कमीको कारण साइटमा मीलका लागि मार्च गर्न वा चलाउन बाध्य भए। एकपटक त्यहाँ, तिनीहरू पनि अशुद्ध माध्यमबाट नखोल्न बाध्य भए बाध्य भए तापनि सबै भन्दा आधारभूत उपकरणहरूको कमी।
प्रीमियर हाउले अगस्त4मा प्रभावित क्षेत्रलाई भेट्न क्यारियर-बचत गर्ने निर्णय गरेको थियो, जहाँ उनीहरूले आफन्तहरूलाई दुःख र दुखाइ व्यक्त गरे। लन्डन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जंग चाङको आत्मकथा अनुसार, यो व्यवहारले गंगाको चारको साथ असाध्यै भिन्नता देखाएको थियो।
जियांग किंग र गंग को अन्य सदस्यहरु लाई राष्ट्र को सम्झना दिलाउन को लागी उनिहरु लाई भूकंप को उनको पहिलो प्राथमिकता देखि विचलित गर्न को लागि अनुमति नहीं दिइयो: "डन को अस्वीकार"। जियांगले सार्वजनिक रूपमा यसो भनेका थिए "त्यहाँ मात्र सयौं हजार जना मृत्युहरू थिए। त्यसैले के? ड्यान जियाओपिंगको निन्दा गर्ने आठ लाख मानिसहरू चिन्ता गर्छन्।"
बीजिंगको अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:
यद्यपि राज्य-चलान मिडियाले चीनका नागरिकहरूलाई विनाश घोषणा गर्न असामान्य कदम उठ्यो, सरकारले विश्वव्यापी भूकम्पको बारेमा घनिष्ठ रह्यो। निस्सन्देह, संसारभरका अन्य सरकारहरू सचेत थिए कि साइजगोर्ग पढाइको आधारमा एक महत्वपूर्ण भूकम्प लिइएको थियो। तथापि, 1971 सम्मको क्षतिपूर्तिको क्षति र संख्याको संख्यालाई थाहा छैन, जब राज्य-आधारित सिन्हुआ मिडियाले विश्वलाई जानकारी प्रदान गर्यो।
भूकम्पको समयमा, जन गणतन्त्रको अन्तरवार्ता र इन्सुलेटर नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सीहरू र रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको रूपमा समेत त्यस्तो तटस्थ निकायबाट आएका सबै प्रस्तावहरूलाई इन्कार गर्यो।
बरु चिनियाँ सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई "भूकम्पको प्रतिरोध र आफूलाई आफैं उद्धार गर्न आग्रह गर्नुभयो।"
भूकम्पको भौतिक पतन:
आधिकारिक गणना गरेर, ठूलो तांगन भूकम्पमा 242,000 मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाए। धेरै विशेषज्ञहरु पछि देखि अनुमान लगाएको छ कि वास्तविक टोल 700,000 को रूप मा उच्च थियो, तर सच्चा संख्या शायद कभी नहीं जान्दछ।
तांगशान शहर पुनर्निर्माण भएको थियो, र अब3लाख भन्दा बढी मानिसहरूको घर हो। यो विनाशकारी भूकंपबाट यसको तत्काल रिकभरीको लागि "चीनको बहादुर शहर" को रूपमा चिनिन्छ।
धेरै तरिकामा, ठूलो तांगन भूकम्पको राजनीतिक प्रतिक्रिया मृत्युको क्षति र शारीरिक क्षति भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण थियो।
माओ जेडोंग9सेप्टेम्बर 1976 मा मृत्यु भएको थियो। उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको रूपमा बदलेका थिए, न कि चारको कट्टरपन्थी गंगाबाट, तर प्रिमीरे भयो गुउफेन द्वारा। तांगशान मा चिन्ता को उनको शो पछि सार्वजनिक समर्थन ले बसाया, हू साहसी भई 1982 को अक्टोबर मा सांस्कृतिक क्रांति को अन्त मा चार गंग को गिरफ्तार गर्यो।
1981 मा मदम माओ र तिनका वरिष्ठ व्यक्तिहरु को परीक्षण मा राखे र सांस्कृतिक क्रांति को खतरनाक को लागि मृत्यु को सजाय गर्यो। तिनीहरूको वाक्य पछि बीस वर्षसम्म जीवन बिताउन थालियो, र अन्ततः सबैलाई रिहा गरियो।
191 मा जियांगले आत्महत्या गरे, र क्लिकको अन्य तीन सदस्यहरू मरेका थिए। सुधारकर्ता ड्यान जियाओपिंग जेल र राजनैतिक पुनर्वासितबाट रिहा गरियो। उनले 1974 को पार्टी उपाध्यक्ष चुनेको थिए र सन् 1 990को दशक देखि 1978 सम्म चीनको वास्तविक नेताको रुपमा कार्य गरे।
डन्गले आर्थिक र सामाजिक सुधारको थालनी गरे जसले चीनलाई विश्व स्तरमा ठूलो आर्थिक शक्तिमा विकास गर्न अनुमति दिएको छ।
1976 को ठूलो तांगन भूकम्प जीवनको हानिको कारण बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा खराब प्राकृतिक आपदा थियो। तथापि, भूकंप सांस्कृतिक क्रांतिको अन्तमा साधन साबित भयो, जुन सबै समयका सबै भन्दा खराब मानव निर्मित प्रकोप थियो।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा सांस्कृतिक क्रांतिवादीहरूले पारंपरिक संस्कृति, कला, धर्म र संसारको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको बारेमा जानकारी दिए। तिनीहरूले बौद्धिकहरूलाई सताए, सम्पूर्ण पीडाको शिक्षालाई रोक्न सकेन र निर्धक्क हिंसा र हजारौं जातीय अल्पसंख्यक सदस्यहरू मारे। हान चीनियाँ, पनि, रातो गर्ड्सको हातमा लुगाफाटाको दुर्व्यवहारको विषय थियो; 1966 र 1976 को बीचमा लगभग 750,000 देखि 1.5 मिलियन मानिस मारिएको थियो।
यद्यपि तांगन भूकंपले दुःखलाग्दो जीवनको कारणको कारण, यो सबैभन्दा ठूलो डरलाग्दो र अपमानजनक प्रणालीको अन्त को अन्तमा कुञ्जी थियो जुन संसारले कहिल्यै देखेको छ। भूकम्पले चार गुणाको गंगा पावरलाई पराजित गर्यो र चीनको जन गणराज्यमा अपेक्षाकृत वृद्धिको खुलापन र आर्थिक वृद्धिको नयाँ युगमा प्रयोग गर्यो।
चांग, ​​जंग। जंगली स्वान: चीन को तीन छोरीहरु , (1 99 1)।
"तांगन जर्नल; खाने बिटाने पछि, 100 फूल का खिलना," पैट्रिक ई। टायलर, न्यूयोर्क टाइम्स (28 जनवरी 1 99 5)।
"चीनको किलर क्वेक," टाइम पत्रिका, (जुन 25, 1967)।
"यो दिन: जुलाई 28," बीबीसी समाचार ओनलाइन।
"चीनले तांगनको भूकम्पको 30 औं वर्षगाँठको चिह्न गर्दछ," चीन दैनिक समाचार पत्र, (28 जुलाई, 2006)।
"ऐतिहासिक भूकम्प: तांगशान, चीन" अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, (अन्तिम जनवरी 25, 2008 मा परिमार्जित)।
चार्ल्स वी को परेशान सफलता: स्पेन 1516-1522
एडल्फ हिटलर जीवनी
कुश्ती सम्बन्धी सम्बन्धी - कुन कुश्तीहरू साँच्चै सम्बन्धित छन्? (2015)
रोलबर्ले बियरिंग्स को भिन्नता के हो?
पास्ताल कला आपूर्ति सूची संग आफ्नो Pastel कलाकृति मा शुरू करो
शीर्ष मैक्सिकन संगीत ब्यान्ड्स
17 जन्मदिन एक कलेज मनाउन रचनात्मक तरिका
शाही चीनको सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के थियो?
पौराणिक कथा: परिभाषा र उदाहरण
इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र के हो?
शीर्ष 10 युद्ध डेडका सिनेमाहरू
नेप्चुनको रहस्यमय डार्क Vortices
Reiki साझा होस्टिंग को लागि तैयारी
वेंडर - बेचन गर्न
झ्यालखानाका देवता फोटो गैलरी
शीर्ष अद्वितीय र असामान्य सिगारहरू
नेपालका जीवित देवी
हिपाइडोको इतिहास र शैली गाइड
8 डिसेक्सिया सफलता संग विद्यार्थीहरुलाई मदत गर्ने तरिका